» “माओवादीबाट एमाले”प्रवेश गरेकाहरु, चुनावमा हुन सक्छन,पत्तासाफ ! “माओवादीबाट एमाले”प्रवेश गरेकाहरु, चुनावमा हुन सक्छन,पत्तासाफ ! – हाम्रो खबर
“माओवादीबाट एमाले”प्रवेश गरेकाहरु, चुनावमा हुन सक्छन,पत्तासाफ !
हाम्रो खबर संबाद दाता 122 Views
“काठमाडौं । माओवादी” केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गर्दा सांसद पद गुमाएकाहरु आउँदो उपनिर्वाचनमा फेरि सांसद पदका लागि चुनाव लड्ने तयारीमा छन ।तर उनीहरुको सांसद” बन्ने योजनामा गठबन्धनका कारण अधुरै रहन सक्छ । मतलब उनीहरु चुनावबाट पत्तासाफ हुन सक्छन । साना दल बाहेक अन्य ठुला पाँच दल एकतिर एमाले एक्लै एकतिर हुदा उनीहरुलाई चुनाव जित्न कठिन छ ।
प्रतिनिधिसभाका” रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको चर्चासँगै चुनावी जोडघटाउ सुरु हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेपछि अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट–३ का प्रभु साह, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी र कैलाली–४ का लेखराज भट्टको क्षेत्र रिक्त, भएका हुन् ।
२०७४ को आमनिर्वाचनमा उनीहरू एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट फेरि पनि यी चारै जना उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । तर, पाँच दलले गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा भइरहेका बेला चारै जनालाई जित निकाल्न सजिलो भने छैन ।”
“अर्घाखाँचीमा रायमाझीलाई चुनौती”
“अर्घाखाँचीमा २०६४ सालको, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता तीनपटक लगातार निर्वाचित भएर उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका टोपबहादुर रायमाझीलाई उपनिर्वाचनमा चुनौती, देखिएको छ । दुईपटक आफ्नै बलमा र २०७४ मा एमाले–माओवादी ‘वाम गठनबन्धन’ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत मत पाएर उनी निर्वाचित भएका थिए ।
२०७४ मा रायमाझीले ,कांग्रेस उम्मेदवार रामबहादुर बीसीलाई करिब १८ हजार मतान्तरले हराएका थिए । रायमाझी २०७० सालमा माओवादीका शीर्ष नेताले मतगणनास्थल बहिष्कार गर्दा पनि पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै गणनास्थलमै बसेर निर्वाचित भएका थिए ।
एमालेको जिल्ला नेतृत्वले ,उपचुनावमा रायमाझी नै उम्मेदवार हुने बताएको छ । रायमाझी भने उपनिर्वाचन हुनेमै विश्वस्त छैनन् । ‘उपनिर्वाचन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन भइहाल्यो र पार्टीले टिकट दियो भने म उठ्ने हो ।’ अरू दलको गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले एमालेलाई अर्थ नराख्ने उनले बताए ।
“जिल्लामा धेरै विकास, योजना भित्र्याएकाले उनी जनस्तरमा भिजेका नेता मानिन्छन् । एमालेमा लागेका रायमाझीसँग माओवादीको पूरै पंक्ति छैन । उनीसँगै नेता चन्द्रबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सभा सदस्य पद त्यागेर एमाले रोजेका छन् । रायमाझीसित ३० प्रतिशत माओवादी कार्यकर्ता एमालेमा लागेको अनुमान छ ।
“विभाजनपछि एकीकृत, समाजवादीमा प्रभाव पार्ने नेताजति एमालेमै बसेका छन् । रायमाझीका लागि चुनाव जित्ने बलियो आधार एमालेको संगठन, आफूसित आएको पूर्वमाओवादी समूह र व्यक्तिगत प्रभाव हो । तर, केन्द्रमा भएको गठबन्धन उपनिर्वाचनमा पनि कायम रहेमा रायमाझीलाई जित्न सहज छैन ।
‘अहिले रायमाझीको, विकल्प छैन,’ एमाले जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले भने, ‘अरू सबैको गठबन्धन भए पनि हामी एक्लै भिड्छौं र सानदार तरिकाले चुनाव जित्छौं ।’ २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका साझा ,उम्मेदवार रायमाझीले ५० हजार ८ सय ३७ र कांग्रेसका रामबहादुर बीसीले ३२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएका थिए ।
“समानुपातिकमा एमाले नै पहिलो दल बनेको थियो । एमालेले ३० हजार ४!, सय १७, कांग्रेसले २८ हजार ३ सय ६९, माओवादी १४ हजार ९ सय ६२ र राजमोले ४ हजार ७ सय ७१ मत पाएका थिए ।कांग्रेस र एमालेको हाराहारी संगठन भएकाले त्यसमा राजमो, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत थपिँदा गठबन्धन कायम रहेमा रायमाझीलाई जित्न कठिन हुन सक्छ । गठबन्धनभित्र भागबन्डा गर्दा, अर्घाखाँची कुन दललाई पर्ने र को उम्मेदवार हुने भन्ने अनिश्चित छ ।
“कांग्रेस ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले नै उम्मेदवार पाउँछ भन्ने ढुक्क छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूनिकट पूर्वसांसद डिलाराम आचार्यलाई उम्मेदवार बनाउन जोडबल गर्न सक्ने अनुमान पनि छ । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जिल्ला नेता केन्द्रमा गठबन्धन नभए चुनावी तालमेल गरेर भए पनि रायमाझीलाई हराउने कसरतमा छन् ।”
“कांग्रेस सभापति विष्णुप्रसाद खनालले उपनिर्वाचनमा पार्टीले अघि सारेमा आफू चुनाव लड्ने बताए । ‘गठबन्धन भएमा मत बढ्छ, नभए पनि कांग्रेसले एक्लै लडेर जित्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसप्रतिको जनलहर र विश्वास छ । कांग्रेसलाई अब चुनाव जित्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’
“साहलाई विरासत जोगाउने चिन्ता”
तत्कालीन माओवादी द्व,न्द्वका,लमा मातृका यादवसँगै मधेसमा संगठन विस्तार गर्न खटिएका प्रभावशाली नेतामा गनिने प्रभु साह अहिले पदविहीन छन् । २०७४ मा माओवादीबाट रौतहट–३ बाट विजयी उनी एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमेको हो ।
“२०६४ देखि नै माओवा,दीबाट चुनाव जित्दै आएका साह मधेसमा बलिया नेताका रूपमा गनिन्छन् । उनले छिटो उपचुनाव गर्न माग गर्दै आएका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वा प्रदेश सांसदको पद रिक्त भएमा बढीमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारले खिल्ली उडाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘दुई दिनका लागि भए पनि उपचुनाव गर्नैपर्छ ।
“उनी पछिल्लो समय ,गृह जिल्लामा भेटघाट कार्यक्रममा व्यस्त छन् । साहले २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता किशोरी यादवलाई हराएका थिए । उनले २०७४ मा कांग्रेस नेता सुनीलकुमार यादवलाई पाराजित गरेका थिए ।
“एकताका माओवादी, केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिने साह तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा मन्त्री बनेका थिए । नेकपा विघटनसँगै उनी एमालेमा लागेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विश्वासपात्र मानिने साह भट्टराई माओवादीबाट अलग भएपछि तटस्थ बसेका थिए । पछि दाहालनिकट भएर मन्त्री पनि बने ।
“माओवादीले विस्तार ग,रेको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तत्कालीन महासचिव भएपछि साहले माओवादी नेतृत्वसँग सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए । रौतहटमा प्रभाव बलियो बनाउने अभियानमा लागेका उनी तत्कालीन नेकपाको प्रदेश २ अध्यक्षसमेत थिए ।साहकी श्रीमती रीनादेवी मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर छिन् । साहले श्रीमतीलाई मेयरको टिकट दिएको भन्दै नगरपालिकाका, विद्यार्थी नेता धीरज पटेलले पार्टी त्यागेका थिए । माओवादी त्यागेपछि साह अहिले कमजोर भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
“यद्यपि उनी आफूलाई अहिले पनि बलियो ठान्छन् । कांग्रेस नेता यादव साहले माओवादी त्यागेपछि कमजोर भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अबको निर्वाचनमा साहले जित्ने कुनै सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताले साहलाई चिनिसकेका छन् । दल बदलु भएपछि जनताको विश्वास गुमेको छ ।’
“कैलालीमा वामपन्थीलाई सकस”
कैलालीमा प्रतिनिधिस,भा सदस्यका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–४ बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार लेखराज भट्ट र कैलाली–३ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार गौरीशंकर चौधरीले एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरू दुवै पदमुक्त भएका थिए ।
“पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका, भट्टले कांग्रेस उम्मेदवार सुनील भण्डारीलाई १० हजार ३ सय ९९ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । भट्टले ३१ हजार ३ सय ५९ मत पाएका थिए भने भण्डारीले २० हजार ९६० मत पाएका थिए । गौरीशंकर चौधरीले कांग्रेस उम्मेदवार रामजनम चौधरीलाई पराजित गरेका थिए ।गौरीशंकरले २४ हजार ८ सय ७९ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा कांग्रेसका रामजनम चौधरीले २० हजार ४ सय ९४ मत प्राप्त गरेका थिए । लेखराज प्रतिनि,धिसभामा भिडेका बेला प्रदेशसभा क र ख मा नेकपा एमालेका दीर्घ सोडारी र कृष्णप्रसाद सुवेदी विजयी भएका थिए । त्यसबेला उनीहरू तीनै जनाको संयुक्त प्रतिस्पर्धा भएकाले कांग्रेस कमजोर भएको थियो ।
“भट्टको निर्वाचन, क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा सोडारी १६ हजार १५ सय ५ मतसहित विजयी भएका हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका यज्ञराज चौधरीले ११ हजार ४ सय २५ मत पाए । यस्तै प्रदेशसभा ख मा एमालेका कृष्ण सुवेदी १६ हजार २२ मतले विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हीरादत्त भट्टले ११ हजार ८ सय ३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
“अहिले भट्टले माओवादी ,केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्दा तत्कालीन विजयी उम्मेदवारहरूमध्ये सुवेदीमात्र एमालेमा छन् । सोडारी एकीकृत समाजवादीमा छन् । स्थानीय कार्यकर्ताले अब विगतजस्तो लेखराज भट्टको निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेलाई सहज नहुने आकलन गरेका छन्
“यस्तै माओवादी केन्द्र, परित्याग गरेपछि रिक्त भएको गौरीशंकर चौधरीको क्षेत्र कैलाली–३ मा पनि पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । त्यसबेला गौरीशंकर चौधरीसहित प्रदेशसभाका दुवै सिटमा वामपन्थी उम्मेदवार विजयी भएका थिए तर प्रदेशसभा सांसद वीरभान चौधरी र अमरबहादुर साउद अलग पार्टीमा छन् ।”
“वीरभान साविकको माओवादी केन्द्रमा छन् भने साउद एकीकृत समाजवादीमा छन् । कैलाली–३ को प्रदेशसभा ख मा एमालेका साउदले त्यसबेला ११ हजार ८ सय ७७ मत र कांग्रेसका लक्ष्मणबहादुर शाहीले ७ हजार ४ सय ९२ मत पाएका थिए । त्यस्तै प्रदेशसभा क मा माओवादी केन्द्रका चौधरीले नेपाली कांग्रेसका पुरनप्रसाद चौधरीलाई पराजित गरेका हुन् । वीरभानले १५ हजार ८ सय ७३ मत प्राप्त गर्दा पुरनले १२ हजार २ सय ६१ मत पाएका थिए ।””